Virgo Mukadzi - Zodiac Maitiro & Hunhu Murudo, kugarisana & Hupenyu! - Zodiac Zviratidzo
Iyo Virgo Mukadzi Hunhu Hwake & Hunhu Mukudanana, Kuenderana & Hupenyu
Iye anoita kunge ngirozi, kana iko kunge kwake-kunge kutaridzika-kunge ngirozi kana zviito zvinokuswededza mukati nekuita kuti iwe utarise rwechipiri. Wobva watora kechitatu kutarisa, uye chechina! Nekuti anongobatsira uye anoyamura pese paanoenda. Iye akanaka kwazvo uye akanaka zvekare – ndizvozvo, anotyisidzira katatu! Pasina mubvunzo iye akangwara, uye huchenjeri hwake uye runako zvinokwezva. Asi, zvinoshamisa sezvazvingave, iwe ungamuudza kuti akanaka, asi haazokutenda nekuti ane mwero uye anozvininipisa.
Hunhu Hwake & Hunhu Mukudanana, Kuenderana & Hupenyu
Hongu, tiri kutaura pamusoro peMhandara Mukadzi… iwe unoziva, iye anoita kuti moyo wako urove nekukurumidza pese paunoziva kuti aripo. Anoita kuti wese munhu akamukomberedza agadzikane, uye iwe ungangoda kuwana imwe yega nguva yekuva naye yekutaura kwemaawa kumagumo. Inoyevedza, yakasarudzika, yakazvipira, inosetsa, yakapfava, inokwezva, uye inoedza kugadzirisa zvese zvainobata. Ndezvipi zvimwe zvaungabvunze?
Saka, iwe unofunga iwe unokwanisa kubata iyi yakasarudzika, asi dzimwe nguva isina zororo Virgo Mukadzi?
Virgo Mukadzi Tafura yezviri Mukati
Murudo & Mumubhedha
Hunhu, Hunhu, Hunhu
Maitiro Ekukwezva Mhandara Mukadzi
Kudanana neMhandara Mukadzi
Chokwadi, Mythology, & Metaphysics
Mercury ndiyo simba repuraneti rinotonga pamusoro peVirgo Vakadzi; nyika yakatumidzwa zita remwari wechiRoma mutumwa uye mwari anotonga pamusoro pembavha, rombo rakanaka, hunyengeri, kufamba, miganhu, kutaura kwakanyanyisa, uye kutaurirana. Aya hunhu hunogona kuratidza kumusoro, zvirinani muchikamu, mumukadzi weVirgo. Semuenzaniso, mukadzi wako weVirgo anogona kunge aine izwi rinonakidza rekutaura iro rinongopa zvimwe kune rake rinoshamisa kutaura kana achitaura.
Hunyanzvi hwake hwekutaurirana hwunopfuura hunoshamisa, uye iye ndiye anoziva nzira yekumisikidza yake yega miganho paine dambudziko diki rekuita kuti vazivikanwe kwauri. Anogona kunakidzwa nekufamba uye kutambanudza miganho zvakare kungoona iyo miganho yaanogona kuyambuka.
Mukadzi wako weVirgo anogona kunge ari huchenjeri, hunyengeri, kana kutonakidzwa nehunyengeri hwekutamba nguva nenguva. Kana ari Virgo anoenzanisira simba rake, anogona kungoba moyo wako. Kana kusaenzana kuripo, iwe unogona kumuwana achibhururuka, asiri wekuzvipira, asina zororo, uye achiba nemoyo wako chete mushure mekunge azvityora.
Chiratidzo chemapuraneti cheMercury muchinjikwa une denderedzwa pamusoro payo, uye pamusoro pechitenderedzwa pane crescent. Iyi crescent inomiririra yechirume, neiyo yasara inomiririra yechikadzi, uye iyo Mukadzi weVirgo, kana zvanyatsoenzana, ndiyo mhedzisiro yekuratidzira kweprojekti yechirume uye yekuzviisa / yekugamuchira simba revakadzi; akasimba, anozvimiririra, uye anoenda-kunotora, asi anokwanisa kuva wechikadzi-akapfava uye akapfava kana achishuva. Denderedzwa riri muchiratidzo cheMercury rinoreva, kwete musoro chete, asi ungwaru uye chigaro chemweya pamwe nemweya.
Iwe unogona kutarisira wako Virgo Mukadzi kuve akachenjera mukadzi, asi zvakare ane mweya uye angangoita emweya futi. Muchinjikwa uri pasi pedenderedzwa unoreva ndege chaiyo, uye mukuita saizvozvo inoratidza kuti Virgo Woman inoita sei kuti njere nemweya zviite mutambo. Mercury inotakura iyo Caduceus, chiratidzo chakajairika chinoreva kupora, saka anogona kuve neanogona ekurapa kugona, kana anogona kushanda mune yehutano nzvimbo. Anogona kutonakidzwa nehutano hwakakwana.
Virgo Mukadzi Murudo & Mumubhedha
Iwe unogona kutarisira kuti Mukadzi weVirgo ave nekutya, kushushikana uye kusagadzikana kana ave kudanana nekuti rudo harusi pakati pemamwe manzwiro emanzwiro aano tsamira maari; asi kana iwe ukakunda moyo wake, iye achakuda nehupamhi hwakadzama zvekuti zvinogona kutokushamisa. Pane imwe nguva pamusoro pekutanga kunetseka uye kutya, iye achatumbuka seruva riri mumaoko emurume ane rudo anoziva nzira yekumunyengerera nayo.
knight yemikombe tarot kadhi zvinoreva
Anokunda kunyara kwake zvakakwana mubedroom kana iwe uchikwanisa kumugonesa iwe uri akavimbika uye wechokwadi. Kamwe paunovimbwa, iwe unowana mukadzi weVirgo anodakadza anoda, izvo zvine chekuita nezvese iwo manzwiro aakachengetwa achitarisa kumashure kweiyo yekuongorora yeruzhinji mufananidzo kwenguva yakareba kudaro. Imba yekurara iri kugamuchirwa zvakanyanya sezvo hukama hwacho hunowedzera. Mukadzi wako weVirgo anokushamisa neuipi uhu hunenge hunoshuvira mhandara inoda kuve: Hupenyu hwepabonde huchafamba kubva pakudziya kusvika kune zvinonhuwira zvinopisa mumasekondi mashoma se3.0!
Mukadzi weVirgo ndemumwe anogona kuve wese wechikadzi kana iye anogona kunge ari padivi rine tomboyish uye haungomboziva hunhu hwaachazopa. Sei? Nekuti murudo iye anoziva kuve asingafungidzirwe zvinochengeta zvido zvako. Ita zvese zvekudanana nemusikana zvinorota; mutakure iye pamusoro pechikumbaridzo pasina chikonzero kunze kwekuita saizvozvo; vhura magonhi emota, dhonza cheya iye, mutendere kuti agare pekutanga, uye mutendere amire pamberi pako paunenge uchisimuka kubva patafura. Mutumire maruva, machokoreti, uye umupe chipo chinogara chisingakanganwike uye wakunda moyo wake zvachose. Flirt naye uye ita saizvozvo kazhinji sezvaanoda kuziva iwe uchiri kumuwana achikwezva zvisinei kuti wave nenguva yakareba sei muri pamwe chete.
Hunhu Hwake, Hunhu, Hunhu
Hazvizotora nguva yakareba kuti iwe uwane wako Virgo Mukadzi ndemumwe ane ziso rinoshamisa rekukwana; iye anocherekedza kunyangwe chidiki-diki cheruzivo uye anovimbisa chero chaanobata chinotaridzika zvakanakisa kana chingagone kuguma mune yakanakisa mhedzisiro kana mharidzo. Amai vake vakamudzidzisa achiri mudiki kutora kudada kukuru mune zvese zvaanobata uye kuve nechido kusaina zita rake kune izvo ruoko rwake rwakabata.
Akanyatsorongeka muhofisi uye kumba sezvo asingakwanise kuzviita pamba kunze kwekunge zvese zviri mugwara rakakodzera. Kamwe kana mabasa apedza, anotsvaira knick-knacks uye anochinja mucheka, ipapo chete ndipo paanozobvarura shangu dzake mukombe wewaanofarira mishonga tii uye nebhuku rakanaka. Mukana hachisi chinhu chinofarirwa nemukadzi weVirgo. Anonyanya kuva nehurongwa hwakazara, hwakajeka, akaronga kongiri, uye akaundi yake yekubhangi izere. Anoda dendere rakagadzikana dendere rekuchengetedza.
Kana iwe uchida mukadzi ane rudo, iwe unowana anonzwira tsitsi uye munyoro mukadzi kana iye ari pasi pesimba reVirgo Sun Sign. Dzimwe nguva zvakaoma kunzwisisa mukadzi weVirgo. Iwe unogona kunetseka kunzwisiswa kana iye achizeza kutaura kwake kwechokwadi manzwiro. Iye anoedza kurega zvine hungwaru kutonga musoro wake uye kugara achichengeta manzwiro ake mukutarisa.
Hupenyu hwake chirevo ndechekuti, 'NDINOZIVISISA' saka pfungwa dzake dzekuongorora dzinogara dziri pamberi uye dzichidzora, zvinova zvinopesana nemanzwiro ake. SeVirgo kana mhandara zuva chiratidzo, manzwiro ake akachena uye akasimba. Senge ari kusangana nenguva imwe neimwe, anotarisa pamanzwiro ake kekutanga. Pasina pfungwa yake yekuongorora kuti arambe akaenzana, anogona kukombamira kuzvikamu zvekushushikana, kusanduka kwemamiriro, uye nguva dzaanonzwa kuremerwa.
Mwoyo & Imba
Iwe unogona kutarisira kuti imba yemukadzi weVirgo ive yakachena zvisingaite, zvakanyanya sekunge kuti unogona kudya pasi uye usananzva tsvina kana utachiona mumuromo mako. Sei? Iye anonatsa kunge maniac sezvo kuchenesa nzvimbo kwakafanana nekudzoreredza yakachena, mhandara hunhu
Iye ane hutsanana, uye kana zvishoma zvikaenzana, anogona kuve germaphobe uyo anogeza maoko ake mushure mekubata kwese ruoko. Anogona kudzipukuta nesimba rekuchenesa ruoko zvakare. Haazombofunga nezvekuti munhu waakakwazisana naye maoko angaite sei pakukurumidza kwake kuda sanitization, futi.
Anoda kuve nezvose munzvimbo yakasarudzika uye anotora mukana wehunyanzvi kuona kurongeka kwezvinhu zvake. Iwe unogona kuwana nzvimbo-yekuchengetedza nzvimbo mabhegi uye akakosha ekuchengetedza midziyo muwadhiropu. Micheka yake yakadzvanywa kana kupiswa uye yakachengetwa, uye hauzomborasikirwa neremotevhizheni mumusha weMukadzi weVirgo! Ichave irimukati mecaddy iri kure yakaturika pasofa yakafukidzwa pasofa painogara chero nguva isiri kushandiswa.
Hutano & Hupenyu-Hupenyu
Chiratidzo cheVirgo chinotonga ura uye mudumbu. Izvi hazvishamise kuona ichi ndicho sosi umo muviri wese unowana zvinovaka muviri. Izvo zvakare zvine basa rekusefa kubva pane zvese zvakasviba muchikafu chaunodya. Iyo tsvina, hongu, inopfuura semarara sezvo izvo zvinovaka muviri zvinowira pasi kune yavo yakakosha, fomu yakapusa. Mutumbi unozoshandisa izvo zvinovaka muviri kupa zvikamu zvakasiyana zvemuviri zvinotarisirwa kugadzira mafuta. Izvo hazvifanirwewo kushamisika kuti Virgo inotonga immune system.
Iyo yekugaya sisitimu uye immune system zvakabatana kwazvo. Uyezve, immune system inoshanda sedziviriro kumuviri; inovavarira kuchengetedza muviri usina chirwere kana kuchena. Kana iyo Mukadzi weVirgo ikawira pasi pekushushikana kwakanyanya, zvinogona kukonzera matambudziko ese ekugaya, maronda, uye matambudziko nedziviriro. Manzwiro akasiyiwa asina kuchengetwa anogona kupedzisira aipisa muviri nekupusha pfungwa.
Basa & Mari
Mushandi akazvipira uyo akangwara, anoongorora, uye akagadzirira kugadzirisa matambudziko sezvavanomuka: Ndiwo mashandiro anoita mushandi pamwe neweVirgo Woman wako shamwari yako yechikadzi. Anopenya muhofisi. Maitiro aanoshanda nevanhu, anotaurirana, anobata mapepa, anoronga hofisi yake, uye nemabatiro aanoita kunge anoziva chaipo pese pazvinomuita chinhu chikuru muhofisi.
Iye zvakare chinhu chakakura kune vaanoshanda navo kana timu. Vazhinji vaanoshanda navo vanoenda kwaari kana vakatarisana nenyaya vachitarisira kuti nzira yavo yekuongorora ichabatsira mukugadzirisa. Zvekare, ziso rake rezvishoma pane zvese zvinomuita mushandi kambani inogona kukoshesa uye kuvimba.
Nezve mabasa, anogona kuita zvakanaka semutsoropodzi sezvo achigona kutaura zvakanaka. Maitiro ake ekuongorora anozobatsira mukuvandudza kusasarura. Anogona kuita zvakanaka kuongorora nyaya, mabhuku, mabhendi, mabhaisikopo, mitambo kana dzimwe nzira dzevaraidzo. Asi, kuva nedumbu pasi pekutonga kwaVirgo, aizoitawo inonakidza foodie uye yekutsoropodza muresitorendi.
Pfungwa yake yekuongorora, kugona kudzidza kongiri uye zvisinganzwisisike zvidzidzo, uye chishuwo chake chekushandira vamwe chinomuita gweta rakanakisa kana chiremba zvakare. MaVirgos mazhinji anopinda mumunda wevanamukoti kana hutano hwepamba sezvavanoteedzera basa rinobhadhara uye rinopa mubairo. Kana iri nyaya yemari, iye saver uye otarisa kushomeka kwekutonga pamusoro pehupfumi hwemunhu sekusaremekedza kusinganzwisisike.
Kana iwe uchida kuratidza kukwezva kuMhandara Mukadzi, iwe unofanirwa kuita zvinhu zvaachada: Izvi zvinoreva kuti unofanirwa kupfeka zvakapinza, kuve wakachena, kunhuhwirira kukuru, kutaridzika zvakanaka, uye kuve nebvudzi rako rakakwana. Iye anonamira kune ruzivo, uye iye achaona iro bvudzi kunze kwenzvimbo! Taura naye zvine chiremerera uye usvike naye pasina kuchera mune rake bhizinesi zvakanyanya sezvo iye asingakwanise kumira akabatikana kana mumwe munhu anokarira. Mupe nzvimbo paanoikumbira uye inomutendera kuti anakidzwe neyake nguva pasina zvinomukanganisa- Zvinotaridza kuti anoremekedza zvaari kuda nezvaanoda. Kana iwe uchida kumukwevera mukati, mumukwezve nenjere dzako sezvo achinyatsoratidza kufarira nemurume anorima pfungwa dzake.
Kana iwe uchida kuratidza kukwezva kuMhandara Mukadzi, iwe unofanirwa kuita zvinhu zvaachada: Izvi zvinoreva kuti unofanirwa kupfeka zvakapinza, kuve wakachena, kunhuhwirira kukuru, kutaridzika zvakanaka, uye kuve nebvudzi rako rakakwana. Iye anonamira kune ruzivo, uye iye achaona iro bvudzi kunze kwenzvimbo! Taura naye zvine chiremerera uye usvike naye pasina kuchera mune rake bhizinesi zvakanyanya sezvo iye asingakwanise kumira akabatikana kana mumwe munhu anokarira. Mupe nzvimbo paanoikumbira uye inomutendera kuti anakidzwe nenguva yake ega pasina chinomukanganisa- Zvinotaridza kuti anoremekedza zvaari kuda nezvaanoda. Kana iwe uchida kumukwevera mukati, mumukwezve nenjere dzako sezvo achinyatsoratidza kufarira nemurume anorima pfungwa dzake.
Nyonganiso, zvakapoteredzwa, zvisina kumira zvakanaka, mapepa asina kurongeka, zvinhu zvakarasika, uye mhepo inokanganisa iri pamusoro pechinyorwa chevapfuwo veVirgo Mukadzi. Nzvimbo dzakamanikana, vanhu vasina basa, vasina hunhu, kana vasingateerere, uye avo vakanyanya kushushikana nezve bhizinesi rako pachavo vanokanganisa Mukadzi weVirgo nenzira isiri iyo. Chero ani zvake akasviba, anochema-chema, anonyunyuta, kana anoedza kumanikidza kana kutsamwisa iyo Mukadzi weVirgo ari pane runyorwa rwekusada kwechokwadi.
Mutambo Wakanakisisa weMhandara Mukadzi
Shamwari uye Mhuri
Kana mukadzi weVirgo akaita shamwari, hukama hwacho hunogara. Shamwari dzake dzinoziva kuti ndiye mumwe munhu wavanogona kuvimba kunyangwe mumaawa avo akasviba. Iye achatsvaga rairo yake kana ave kuda bhodhi rinonzwika kana achashanya naye kana achida bendekete rekuchema futi. Iko mune hushamwari uko Mukadzi weVirgo anotanga kuratidza humwe hunyoro hunhu hwake hunomhanya chaizvo.
Akazvipira kushamwari dzake uye nenhengo yega yega yemhuri, iyo Virgo Woman inoita super munin'ina, mwanasikana, mukadzi, kana amai. Chero chero basa remhuri raanopinda iye anoisa ngowani iri nyore uye anozadzisa iro basa pazvinenge zvichidikanwa. Mukadzi weVirgo ndiye anoda mhuri yake uye achataura nezve nhengo yega yega yemhuri nekudada. Saamai vemba, hapana zvimwe zvaungaite zviri nani sezvo imba yako ichinge isina gwapa uye vana vakachena.
Iwo maookups angangodaro akabudirira paVirgo anosanganisira kubatanidzwa kweTaurus neVirgo neCapricorn neVirgo. Iyo Taurus chimwe chiratidzo chepasi, saka ivhu rakadzika-rakadzika hunhu hunofamba pamwe chete. Iyo Taurus inoda zvinhu zvakanaka, kudanana, uye nyaradzo. Virgo inoda kuchengetedza zvinhu zvakachena uye zvakachena, inofarira kuve yakanaka, uye inokura yakanyanya kugadzikana neyakaipa hunhu hweTaurus.
Hukama huri pakati peVirgo neTaurus, hwakawanda, hune hunyoro uye hune tsitsi, kuti varege kurovera misoro - ipapo, o zvangu! Une maviri asingachinjiki epasi masimba akagadzirira kutinhira! Kuregerera kuri nyore kune ese ari maviri masayiti hazvo, saka hazvishamise kana mushure mepikisheni nharo paine zvimwe zvinonhuwirira zvekuita bonde kutevera.
Virgos neCapricorn vatungamiriri vakuru, uye hukama hwavo ndehumwe hunogona kuratidza kubatana kwemweya kana nyeredzi dzakayananiswa nazvo. Vaviri vanowana imwe yakakura kambani uye yakapusa kuzorora pese pese. Ose maviri masayero ezuva anoda zvese zvakanaka izvo hupenyu zvinofanirwa kupa zvakare. Chisungo chakakura uye chakasimba chinogoneka pakati peCapricorn neVirgo mweya.
Virgos inozowiriranawo zvakanaka neScorpio kana Cancer. Nemudiwa weCancer, Virgo achawana iyo Cancer yakapfava, inosimudzira, yakapfava hunhu kupfuura inokwezva. Neye Scorpio, iyo Virgo ichada huro hwakapinza hwemurume, uye hunhu hwake hwekuchiva mumba yekurara futi. Iyo Virgo Scorpio yekubatanidza inogona kuve inopisa. Ivo vanongoda kutora hanya kuti varege kupisa zvakare!
Leo, weRegal mhando, uyo anoda kugara achitariswa uye kudzidziswa uye anoda kushamwaridzana uye kuonekera anogona kusiya Virgo kumashure nekukurumidza. Iyo Virgo inofanira kuita basa rese mukuchengetedza hukama. Sei? Iye Leo mudiwa anotsvaga nguva yakanaka yekushamwaridzana uye kusvetuka kubva kune imwe yemagariro chiitiko kuenda kune imwe. Nzira chete iyo vaviri ava vaizoshanda ndeyekuti Leo ndiye mumwe achakura zvakakwana kuti azive kuti kuti agare Mambokadzi achifara, anofanira kumubhadhara iye yaanofanirwa. Ehe, mambokadzi anoda mutero kana maviri nguva nenguva.
Kana iwe uri mune yakawanda yemusoro wemusoro, uye iwe uchifunga kuti unonakidzwa nehukama uchitaura nezve hapana asi bhizinesi, Virgo Libra inogona kunge iri mutambo wakanaka. Kana iwe uchikoshesa kuoma kwemasvomhu mafomula kana kongiri yekuongorora misoro, saka Libra Virgo musanganiswa wekurota. Zvikasadaro, iwe uchawana yakawandisa yakawandisa ongororo inoitika muhukama uhwu kuti ikoshe nguva yemumwe munhu. Kana iwo manzwiro ari kusundidzirwa kumoto unopisa kumashure, uye hapana ari kuzviratidza nenzira ipi neipi yenzira yakasimba, kubatana kweLibra Virgo kwakagadzirirwa kuparadzwa.
Iyo Virgo Sagittarius musanganiswa zvakare haisiyo yepamusoro pairing. Ivo vanoita sekunge havaenderani chiono chavo chenguva yemberi uye hazvireve hazvo kuti vanobvumirana pane zvakakodzera kuratidzwa kwerudo; uye tinokwanisa kukanganwa nezve kubatana pakati peVirgo, uyo ane hunyanzvi hwakakwana, ane Aquarius, uyo anofanirwa kudzora zvese… izvo zvinongova kukwana kwakanyanya kutsvaga mukamuri imwechete, ndoda pasi pano panguva imwechete. Kana iyo Virgo ichida kuitisa kuti ishande nePisces, ivo vanofanirwa kudonhedza mamwe emhando yavo yekukwana. Ino inguva yekutora yerudo gauntlet yemoyo murefu - uye izvo zvinoreva zvakawanda zvacho!
Astrology & Zodiac Zvipo
Zvipo zvinoshanda zvekutenderedza imba, zvinhu zvine hunyanzvi asi izvo zvinorerutsa hupenyu hwake ndizvo zvakanakisa zvipo. Mukadzi weVirgo anogona kuda kutenderera pasherefu rack yezvinonhuwira, caddy ye remotes, kana mwenje wakasarudzika unomurega ajekese muwadhiropu uye pasina kupokana. Iye anofarira anoshanda, anochengetedza, uye anodhura. Muratidze iwe iwe unoziva kutenga nekutenga zvinhu pane chibvumirano - anozochida! Kitchenware, zvishandiso zvegadheni, uye zvinhu zvekuchengetedza imba zvinoshandawo. Unoda chimwe chinhu chine rudo panzvimbo? Mutorere chidimbu chinoshamisira cheshongo kana kumutengera akati wandei matikiti kuimba yemitambo yaanoda zvinhu zvakanaka, uye kuvaraidzwa.
Ngano yechiGiriki inosanganisira Pasi Mwarikadzi Demeter uye Persephone, mwanasikana wake, inoenderana nechiratidzo cheVirgo zodiac. Izvozvowo zvinoenda kune nyaya dzeProserpina naCeres mungano dzevaRoma. Pane imwe nguva, pane zvinongedzo kuna Mwarikadzi Justitia zvakare uye nezviyero zveyero. Idzo ngano dzengano dzekare dzinoenderana nechiratidzo ichi ndedze vanasikana navanamai kana mabasa ehunyanzvi echikadzi, chimwe chinhu icho Mukadzi weVirgo anovavarira kuramba achiyanana neAmai chimiro chinomiririra iyo yekuongorora uye yemwanasikana maficha anomiririra manzwiro eVirgo Mukadzi .
Iyo chiratidzo cheVirgo inosanganisirwa neHermit iyo isingafanire kushamisika kuona kuti iyo Hermit kadhi ndeimwe yekufungidzira kwakanyanya. Iyo Hermit inotsvaga chokwadi sezvinoita iye Mukadzi weVirgo kuburikidza nemaitiro ake ekuongorora- chokwadi muzvinhu zvechokwadi.
Iyo n'anga inoenderanawo nemukadzi uyu uyo ​​anonyengera nyika Mercury anotonga! Anogona kukunyengera uye kuita kuti iwe ufunge kuti haatombori nemanzwiro kana zvakadzika pasi iye itsime risingaperi remanzwiro. Shanu inosanganisirwa nechiratidzo cheVirgo, zvichiratidza gomba rakadzika, magick, pentacle, nemweya pamwe nehungwaru nemweya pamusoro pendege chaiyo.
Shanu inomiririra kukurumidza kugadzirisa kugadzirisa uye avo vanotsvaga ruzivo. Padivi rakashata, zvinogona kureva kusachinjika kwepfungwa, simba rine mhirizhonga, kusagadzikana, uye kusava nehanya. Iyo Chakra inosangana neVirgo ndiyo mudzi chakra, uye sechiratidzo chePasi, izvi zvinoratidza hunhu hwakavakirwa hweVirgo Mukadzi. Panguva imwecheteyo, inoratidza manzwiro ake asina kubatwa anoshanda sesimba rine simba. Manzwiro ake, kana akasiyiwa asina kudzorwa, anotyisidzira kusimuka kubva mukati mukati, nokudaro achimukundisa ne tsunami yemanzwiro.
Mazuva eVirgo: Nyamavhuvhu 22 - Gunyana 22
Glyph tsime rezita rokutanga. Kupera kwechiuno kunoenderana nekuchena kwemhandara, yakachena mhandara. Iko 'M-senge' chimiro chinoreva musikana panguva yekupedzisira chiuno chinoratidza mudziyo, yakavharirwa, uye kuchena kwekukwana.
Sanzikiriti: Kanyā, zvinoreva 'Mhandara Musikana.'
Mutsara wakakosha: 'NDINOONA.'
Unhu: Zvinogona kuchinjika
Kutonga kweAnatomical: Dumbu uye ura hwemuviri, immune system
Mhuka: Jongwe kana Tsindi
zvinoreva hupenyu nzira nhamba 7
Kurota Archetype: Mwarikadzi Wekukohwa, Amai, Mhandara Mwarikadzi, uye Mhandara
Kuenzanisa Hunhu: Kuwedzera mahoridhe uye kukwirira kwenzvimbo yekutarisa
Shiri: Parrot kana Magpie
Matombo ekuberekwa: Emerald kana Peridot
Celtic Muti weMwedzi: Hazel Muti (Aug 5 - Gunyana 1) uye Muzambiringa (Gunyana 2 - Gunyana 29)
Zvinoreva iwo Muti weCelt: Izvo Zvese Kuziva uye Izvo Zvisingatarisirwe
Chakra: Mudzi kana Manipura
Chinese Zodiac Twin: Jongwe
Kugarisana: Capricorn, Taurus
Kushungurudza: Neptune (yazvino), Jupiter (yechinyakare)
Anonakidza Chinese Zodiac Twin: Jongwe
Kukwidziridzwa kwepuraneti: Mercury
aripi mapuraneti izvozvi
Kuwa: Pasi uye Venus
Vanamwari Vemadzimai: Aset, Pele, Minerva, Athena, Ceres, uye Diana
Ruva: Lily, Cornflower, Valerian, Narcissus, Fennel, Gorosi, Magnolia, Madonna, uye Lavender.
Kuporesa Makristasi: Cornelian, Jasper, Ovaline, Aquamarine, Jade, Agate, Agate, Tourmaline, Diamond, uye Quartz
Herbs: Sirivha midzi, chando chechando, rosemary, narcissus, uye cornflower.
Vanamwari veVarume: Mercury naHermes
Simbi: Quicksilver, Mercury, uye Platinum
Mumhanzi Ruzha: IS
Nhamba Vibrations: 5
Mafuta: Sage, Cypress, Melissa, Patchouli, Lavender, Spearmint, zvinonhuwira, clary, fennel, oakmoss, bergamot, nezvinonhuwira
Mapuraneti simba: Ceres (yazvino), Mercury (yechinyakare)
Sekondari Colors: Mavara asina kujeka, mashava, matoni epasi, orenji yakadzika, mithunzi yekuvhuvhuta, goridhe rakadzika, ocher, yakasviba magidhi.
Chinodiwa Chekutanga: Kubudirira kana Kubatsira
Scents: Lavender, ruva remupata, aster, lilac, caraway, cornflower, kana sinou.
Mwaka Mubatanidzwa: Zhizha
Tarot Kadhi Sangano: N'anga kana kuti The Hermit
Miti: Hazel kana Elder
Vakakurumbira: Melissa McCarthy, Jean Smart, Lauren Bacall, Sophia Loren, Shelley Long, Ricki Lake, naIngrid Bergman.
gomarara murume anodanana nemukadzi wescorpio
Zvinoreva gore rejongwe
Ndeapi mapuraneti ari mukutorazve ikozvino